Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamo Cusub oo Kasocda Dalka Burundi oo Gaadhay Muqdisho.
Ciidamo Cusub oo Kasocda Dalka Burundi oo Gaadhay Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ February 16, 2017
Dowladda Burundi ayaa ciidamo cusub geysay Soomaaliya, kuwaas oo badali doona kuwa hadda ka joogo. Ciidamadaas ayaa gaaray magaalada Muqdisho shalay, waxayna badalayaan guutada 34-aad ee Burundi ka joogay Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay.
Guutada cusub oo ah midda 40-naad ee ciidamada difaaca Burundi, oo AMISOM ka mid ah ayaa howlgallo cusub ka billaabi doono Soomaaliya, sida AMISOM ay sheegtay. Taliyaha ciidamada cusub oo shalay markii Muqdisho ay gaareen hadlay ayaa tilmaamay inay ciidamadan ay gacan ka geysan doonaan xasillinta Soomaaliya.
Gaashaanle Leonidas Nsingirankabo, wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin howl cusub inay Soomaaliya ka qabtaan. “Ciidamadeyda waxay diyaar u yihiin shaqada ka horeysa iyo sii waadidda xasilinta Soomaaliya. Waxaan ku shaqeyndoonnaa xeerarka caalamiga ah iyo anshax si aan guul uga gaarno dagaalka”, ayuu yiri gaashaanle Nsingirankabo.
Ciidamada hadda la badalayo waxay xarumo ku lahaayeen magaalada Jowhar. Howshoodana waxay ahayd nabad ilaalin. Tallaabadan ayaa imaneyso ayadoo Burundi ay dhowaan ku hanjabtay inay ciidamadeeda kala baxayso Soomaaliya. Waxay sheegtay in mushaar aysan helin bilihii ugu dambeeyay, kadib markii dalalkii deeqda bixinayay ay dhaqaalaha yareeyeen.